New Train Links Asia na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > New Train Links Asia na Europe
Oge Ọgụgụ: 3 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 18/02/2021)
A ọhụrụ ụgbọ okporo ígwè akara ka ulo oru, ekpuchi Azerbaijan, toro toro, na Georgia. The akara kpuchiri 820 Kilomita na accommodates freights na mgbakwunye njem ụgbọ oloko. Firstly, akara ga-akpa na-jikọọ Europe na China ebe gafere Russia. The train will operate from Azerbaijan’s capital Baku and the Georgian capital Tbilisi to the city of Kars in Turley. Ọzọkwa, Ọ ga-belata njem oge n'etiti Europe ụgbọ okporo ígwè akụrụngwa na Railgbọ okporo ígwè China. The oche nke Azerbaijan, toro toro, na Georgia, nakwa dị ka European Union na-anọchite anya, gara na oghere nke ọhụrụ ụgbọ okporo ígwè akara.
Nkọwa nke ụgbọ okporo ígwè
Firstly, ụgbọ okporo ígwè akara e mbụ zubere ẹkedori na 2010 wee banye 2012. Otú ọ dị, n'ihi na akara agafe site Armenia, ma ndị US na EU na-ego na-eme na nke a mere ka a na-egbu oge. Na mgbakwunye, ahịrị ahụ gafere mba ndị nweburu nke ha ókè-ala- emechi ọ bụla ọzọ (-akpa azụ ka Soviet Union).
Nke abuo, the line which is named the 'Yurop Bridge', ga-jikọọ onodu aku na uba mba agabiga. Chinese ibu na-ebu site na China na Europe na a akara dị ka obere ka 12 ụbọchị. Ọzọkwa, na ụgbọ okporo ígwè ga-ibufe 5 nde tọn ibu kwa afọ na a ọnụ ọgụgụ na-atụ anya na-awụlikwa elu ka 17 nde oge. Ọzọkwa, a ga-eme ka mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri nke ngwá ọrụ na Azerbaijan ndị kasị ibu Caspian Sea region.
Azerbaijan adịghị mara zuru eri nke akara Otú ọ dị, a maara na ha gbazinyere Georgia $775 ego Georgian akụkụ nke akara.
Kazakhstan ugbu a guzosie ike ya dị ọhụrụ 'Silk Road’ na ya ibu ibu ọrụ n'etiti Europe na China. Mere Kazakhstan jere ozi dị ka a na njikọ ala n'ihi na Europe, Asia, na India. Ihe mere eji eme njem Kazakhstan bụ na ọ na-egbutu Europe na Asia site na 10,000 kilomita. Ọzọkwa, Kazakhstan nọrọ n'elu $3 ijeri na ya ụgbọ okporo ígwè e. Nke a na-agụnye $250 nde emefu na Khorgos Gateway. Ọnụ ụzọ ámá a na-enye ndị ụgbọ oloko ndị China ohere ịfefe ngwongwo ha na ụgbọ oloko Europe na-ezere mkpa ọ dị ịgbanwe ahịrị.
Firstly, Azerbaijan onyeisi oche kwuru na ụgbọ okporo ígwè
The Baku-Tbilisi-Kars ụgbọ okporo ígwè bụ nke kasị nso na kasị pụrụ ịdabere na njikọ n'etiti Asia na Europe
Ọzọkwa, na European Union kwuru
Nke oghere nke Baku-Tbilisi-Kars ụgbọ okporo ígwè bụ isi nzọụkwụ na iga interconnections ejikọ ndị European Union, toro toro, Georgia, Azerbaijan, na Central Asia ... tinyere oge ochie Silk Road,
Zụrụ gbaa ụgbọ okporo ígwè
Ebe ọ bụ na ị ama ebe a, gaghị 3 nkeji chọta ndị kasị mma ụgbọ okporo ígwè tiketi maka gị ọzọ njem? Ebe ọ bụla ị na- na-eme atụmatụ ịga Europe anyị nwere ike inyere gị aka ịchọta tiketi. Ma ị na-achọ ịhụ Alps nke Switzerland na Italy or perhaps visit countries like Belgium na Hungary anyị na-na na nwetara gị kpuchie. Akwụkwọ gị gbaa ụgbọ okporo ígwè ugbu a. Ịkwụ ụgwọ maka tiketi iji niile kasị mara ịkwụ ụgwọ ụzọ
Ị chọrọ Embed anyị blog post gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fnew-train-links-asia-europe%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)